Narahina lehilahy iray moramora avy aoriana izy ka raha vantany vao varimbariana dia nosintoniny tampoka ny poketrany izay nisy finday sy vola. Nirifatra nitsoaka ilay mpanao ratsy taorian’izany. Niezaka ny niantso vonjy ilay vehivavy ka nandritra izany mihitsy izy no nifanehitra tamin’ireo polisy nanatanteraka ny asa teny amin’ny manodidina ka noraisim-potsiny ilay mpanendaka. Efa tafaverina amin’ny tompony ilay poketra nisy vola sy finday. Nentina avy hatrany eny amin’ny paositry ny polisy CSP7 ilay tovolahy mpanendaka natao fanadihadiana.